Amanyathelo okudala iCV enomtsalane: Amanyathelo okudala iResume eLungileyo | Creatives Online
Amanyathelo okwenza iCV enomtsalane
Okwangoku, kukho abantu abaninzi abafuna i-curriculum vitae ehambelana nokhetho kunye nobuntu babo. A phindela elungileyo ayikwazi kuphela ukubenza bakuqaphele ngakumbi, kodwa unako ukufezekisa a umfanekiso ogqibeleleyo kwaye unomtsalane ngazo zonke iinjongo oza kuzizalisekisa.
Kwesi sithuba asizukukuthumela kwakhona kwindawo yokusebenzela kunye namathuba ayo omsebenzi, kodwa kwakhona, siza kukubonisa ubukhulu becala, indlela yokufezekisa konke oku ngokudala i-curriculum vitae efanelekileyo.
Ngamanyathelo ambalwa alula unokufezekisa a iprofayile eyimpumelelo.
1 I-curriculum vitae
1.2 Iimpazamo ezinokwenzeka
1.3 Iintlobo zokuqalisa kwakhona
2.1 Chaza inkangeleko entle ngawe
2.2 Bandakanya iinkcukacha zoqhagamshelwano
2.3 Yongeza izakhono zakho
2.4 Yomeleza iCV yakho
2.5 Yenza imisebenzi yakho yangaphambili
2.6 Upelo kunye nethoni
Umthombo: Computer Hoy
I-curriculum vitae okanye i-CV yesifinyezo sayo luxwebhu olusetyenziswa njengesixhobo sokubonisa unxulumano olucacileyo nolucacileyo lwedatha, izakhono namava omsebenzi omntu, ngenjongo yokuba afakwe kuluhlu olufutshane kudliwano-ndlebe lomsebenzi.
Ukuze uyiqonde ngcono, iyafana nesibhengezo esilungileyo okanye isimemo esithunyelwe okanye esiziswe ngumfaki-sicelo somsebenzi, esibandakanya lonke ulwazi malunga nobomi bakhe bokusebenza, iinkcukacha zoqhagamshelwano kunye nebonisa indawo ahlala kuyo. Injongo yokuqalisa kwakhona kukuvelisa a umbono olungileyo kunye nomdla ukuze uzenze waziwe kwaye ngaloo ndlela ufumane udliwano-ndlebe lobuqu, oluphela ngokufumana loo msebenzi uwunqwenelayo.
Idatha yomuntu siqu kufuneka ifakwe kwi-curriculum vitae, ukwenzela ukuba wenze okungakumbi kulula ukufunda nokuqonda ungubani, ungaqhagamshelana njani nawe kunye nento oyenzayo kwiminyaka yakutshanje.
Phakathi kwezona datha zibalulekileyo zezi:
Amagama kunye neefani.
Umhla kunye nendawo yokuzalwa.
Indawo yokuhlala yakho.
Iinombolo zoqhagamshelwano, zimbini ubuncinane.
Idilesi yemeyile yakho ofikelela kuyo rhoqo.
Uphononongo olwenziwayo olubonisa umhla wokuqala nowokuphela, iziko lemfundo, nendawo apho ziye zenziwa khona.
Iikhosi zasemva kwesidanga, iikhosi okanye iindibano zocweyo nazo zenziwa ezibonisa umhla wokuqalisa nowokuphela, iziko, nendawo apho ziqhutyelwe khona.
Amava obugcisa abonisa umhla wokuqala nowokuphela, igama lenkampani kunye nemisebenzi eyenziweyo.
Iilwimi ozaziyo kwaye kwinqanaba elihambelanayo.
Oko isihloko makube yi-"Curriculum Vitae": ukuba ufuna i-CV yakho igqame kwezinye, kungcono ubeke esinye isihloko esitsala umdla.
Isikhokelo se imeyile engafanelekanga: yenza i-imeyile elula kunye nezobugcisa.
Las iimpazamo zopelo: Yenye yezona mpazamo zimbi unokuzenza. Qinisekisa ukuba ubhala yonke into ngokugqibeleleyo.
Yenza iCV yabo bonke: Uninzi lwabantu lusebenzisa i-resume efanayo kuzo zonke izithuba zemisebenzi. Kufuneka ulungise iCV yakho kwisikhundla ngasinye.
Kakhulu ebanzi: ukuba i-curriculum vitae yakho inamaphepha ama-4 ayithethi ukuba ingcono. Yongeza kuphela ulwazi olubalulekileyo.
Sebenzisa i ulwimi kunzima ukufunda: kunqanda ukusebenzisa izishunqulelo ezininzi, i-neologisms, ubuchwephesha, phakathi kwezinye. Kufuneka usebenzise ulwimi olungathathi hlangothi.
Bandakanya iinkcukacha ukuba azihambelani: Akulunganga ukubhala izinto ozonwabisa ngazo kodwa ukuba azinagalelo kwanto, kungcono ungazibeki.
Kanjalo yokudala: Ukuba ungumntu onobuchule, akulunganga ukuyibonisa kwi-CV yakho, kodwa kufuneka ukuphephe ukuyilayisha kakhulu ngokusebenzisa iifonti, imibala kunye nezinye.
Ukungangqinelani: Phambi kokungenisa iresume, phinda uphonononge ngokucokisekileyo imihla eqinisekisa ukuba ichanekile ngembali yakho yomsebenzi. I-resume engahambelaniyo iphakamisa izikrokro ezininzi, ezinokukhokelela ekubeni ulahlwe kwinkqubo yokhetho.
Hayi ukuma ngaphandle impumelelo yakho: kufuneka ubandakanye impumelelo yakho, kodwa ngaphandle kokuba nekratshi kakhulu.
Beka engalunganga idatha- Khangela ukuba amanani akho kunye needilesi ze-imeyile zipelwe ngokufanelekileyo. Nokuba ungumgqatswa olungileyo kwisikhundla ukuba ubeka iinkcukacha zakho zoqhagamshelwano ngokungalunganga, ulahlekile.
Kakhulu ndithobekile: Ukuba unezinto ezintle ozibonisayo kwi-CV yakho, zibeke ngaphandle kokuzisika.
format ku khathaza: Akufanele ube nobuchule kakhulu, kodwa ungabikho konke ukuyila. Jonga ifomathi etsala umdla kwaye ineenkcukacha zokuyila ezilungelelanisa nawe, ebonisa inxalenye yobuntu bakho.
Injongo ayicacanga: kufuneka ucacise ukuba zeziphi iinjongo zakho, ugxile kwiimfuno zenkampani.
Yahlukile iinguqulelo: sebenzisa i-CV enye kuphela, kwaye le yeyona inomtsalane kwaye yeyona ibufaneleyo ubuntu bakho.
Iintlobo zokuqalisa kwakhona
Ngokuxhomekeke kuhlobo lokuphinda luqale, lunokwenziwa ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo. Phakathi kwazo oku kulandelayo kubalaseleyo:
Ubalo-maxesha: yikharityhulam apho onke amava aqeqeshiweyo aququzelelwa ngemihla. njalo ekuqaleni kwindawo yokugqibela ubusebenza. Kukuthanda ukuba uyisebenzise ukuba unamava amancinci okanye akukho nto kwaye ufuna iCV emfutshane.
Uhlehlisa ubalo-maxesha: yeyona isetyenziswa kakhulu, luhlobo oluthile lweCV yangaphambili. Nangona ulandelelwano kufuneka ubandakanye utshintsho amava yobungcali, kulo mzekelo kufuneka uqale ukuquka ukusuka amava kakhulu yakutshanje yobungcali ukuya endala. Isetyenziswa xa izikhundla ezibanjiweyo ziye zafana kwaye zihlala zihlala ixesha elide.
Ubalo-maxesha olusebenzayo: amava ahlelwa ngokwesikhundla kunye nesikhundla esibanjwe kwimeko nganye. Kufuneka uyisebenzise ukuba ubambe izikhundla ezi-2 okanye ngaphezulu kodwa kwiinkampani ezahlukeneyo
Umxube: yindibaniselwano yekharityhulamu esebenzayo neyolandelelwano lwamaxesha. Yeyona inconywayo kwaye enye yezona zinto zisetyenziswa kakhulu, kuba ihlelekile kwaye ilula ukuyijonga.
Creativo: Olu hlobo lwe-resume lusetyenziswe kakhulu kulo nyaka uphelileyo. Yenza umahluko ngakumbi ukuba ufaka isicelo kwicandelo elinjengoyilo, upapasho kunye nolu hlobo lobuchwephesha bokuyila, ngaloo ndlela unika umbono omncinci wento okwaziyo ukuyenza.
Kubalulekile ukuba ubeke ingqalelo kweli nqaku kwisithuba, kuba njengoko besesitshilo ngaphambili, iCV eyenziwe kakuhle ingakunceda ufumane umsebenzi wamaphupha akho. Kufuneka uyazi into omawuyithethe. Landela la manyathelo apho sikubonisa indlela yokwenza i-resume enomtsalane.
Chaza inkangeleko entle ngawe
Iprofayile yobuchwephesha inesivakalisi esifutshane esiqaqambisa amava akho omsebenzi adlulileyo kunye nokuhambelana kwakho okuphezulu kunye nesithuba esifumanekayo kumsebenzi onikezelwayo. Oku kufuneka kubandakanye isihloko okanye isikhundla sakho, izakhono ezifunekayo, kunye nezakhono zomntu kulo msebenzi.
Bandakanya iinkcukacha zoqhagamshelwano
Iinkcukacha zoqhagamshelwano lelinye lawona macandelo abalulekileyo kwi-CV yakho. Uninzi lwabaqeshi bacebisa ukubandakanya igama lakho elipheleleyo, inombolo yakho yefowuni kunye nedilesi ye-imeyile. Qinisekisa ukuba akukho mpazamo kweli candelo kwaye iinkcukacha zakho zoqhagamshelwano zihlaziyiwe.
Yongeza izakhono zakho
Kweli nyathelo kufuneka wenze a uhlalutyo lobuntu bakho ukuchonga ukuba zeziphi izakhono ezikwenza ukuba ulungele isikhundla. Ngokomzekelo, into elula yokuba kwindawo yokunxibelelana nomxhasi, mhlawumbi ubuchule bakho abufanelekanga kangako, ngelixa uxanduva lwakho kunye nomyalelo. Zama ukuba nenjongo kangangoko ukuze ukwazi ukuqaphela izakhono kunye nobuchule bakho.
Yomeleza iCV yakho
Iinkampani ezininzi sebenzisa iisistim zokulandelela umfaki-sicelo ukuskena i-CV phambi kokuba ifundwe ngumqeshi. Ezi zi-automated systems ziyakwazi ukukhangela amagama athile owafakileyo kwi-CV yakho. Ukuba ufuna ulwazi lwakho lugqithise esi sihluzo sokuqala, qiniseka ukuba ulandela la manyathelo:
Thumela i-CV yakho ngefomathi ye-.DOC endaweni ye-.PDF ifomathi.
Faka ulwazi olubalulekileyo kwiheda okanye kumbhalo ongezantsi.
Lungiselela isicatshulwa sibe ziibhulethi.
Sebenzisa amagama angundoqo kulo lonke uxwebhu.
Into ekufuneka uyazi. kukuba unokuhlalutya inkcazo yesikhundla ofaka isicelo kuso kwaye ukhangele i-LinkedIn kwiiprofayili ezifanayo ukuze ukwazi ukukhupha amagama angundoqo kwaye uwasebenzise kwi-CV.
Yenza imisebenzi yakho yangaphambili
Ezinye izithuba ziboleka ngaphezu kwezinye ekunikezelweni kwemizekelo. Ukuba usebenza, umzekelo, kwishishini loyilo, ncamathela kwi-CV yakho Ipotfoliyo enesampulu zetalente yakho okanye iquke ikhonkco ukuba unepotfoliyo yedijithali. Kwi-Behance unokwenza iakhawunti yakho ukulayisha imizekelo yomsebenzi wakho ngokulula kwaye simahla.
Upelo kunye nethoni
Qaphela ukuba i-resume yakho ayinazo iimpazamo zopelo. Ukuba unamathandabuzo malunga negama elithile, ungabonisana nasiphi na isikhangeli sopelo esikhoyo kwi-intanethi. Ukuba ubhala i-CV yakho ngesiNgesi, jonga isipelingi sakho kwaye uzame ukuhoya ithoni othetha ngayo kwabanye. Kubaluleke kakhulu ukuba abanye babone umfanekiso ochanekileyo wentetho yakho.
Kwaye okokugqibela kodwa okungakuncinananga, kuyafuneka ukuba ube nefoto yeprofayile leyo inombala, ngaphandle kwemikrwelo okanye ipixels phakathi kwaye abanye banokukubona ukuba ungubani. Kule nto, kukhethwa ukuba usebenzise imvelaphi efanayo, okanye imvelaphi ye-monochrome apho akukho nto enye iphumayo, ngaphandle kwakho.
Ukuba ufikelele kweli nqanaba kwiposi, siyakumema ukuba uqale ukubhala i-resume yakho ngokusekelwe kumaqhinga esikunike wona.
Ngoku sinokukunqwenelela ithamsanqa kwindlela yakho eya empumelelweni!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amanyathelo okwenza iCV enomtsalane
UDaniel Balaguer sitsho
Inqaku elihle kakhulu, nangona kufuneka sicinge ukuba ukubonelela ngedatha yomuntu siqu njenge-DNI, kunye negama elipheleleyo kunye nedilesi epheleleyo kunokusizisa, umzekelo, ingxaki yobusela besazisi ukuba loo CV ingena kwizandla ezingalunganga okanye isasazwe ngokungenamkhethe.
Kuyacetyiswa ukuba unganiki i-DNI okanye idilesi epheleleyo. Ukuba sifika kudliwano-ndlebe, baya kuba sele beceliwe kuthi okanye siya kukwazi ukubaququzelela
Phendula kuDaniel Balaguer
Zenziwa njani iipowusta
Indlela yokudibanisa iileya kwiPhotoshop